ယခုနှစ်​မှာ ကံမ​ကောင်းခဲ့​ပေမယ့်​ ​နောက်​နှစ်​မှာ ​အောင်​​အောင်​​ဖြေပါ့မယ်​ဆိုတဲ့ ခင်​ပိုးပန်​ချီ - Cele Platform
ခင်ပိုးပန်းချီကတော့ မြန်မာသံနဲ့တရားဓမ္မတေးတွေကိုသာယာနာပျော်ကောင်းလောက်အောင် သီဆိုနိုင်သူ ငယ်ရွယ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အဆိုတော်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး “လိပ်ပြာစံအိမ်” ထဲက သားချော့တေးကို ကျက်သီးထလောက်အောင် သီဆိုပြခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ဟာဆုတံဆိပ်ပေါင်း (၂၃)ခုရရှိခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ် (၈)ဆု ၊ ငွေတံဆိပ် (၁၄)ဆု နဲ့ ကြေးတံဆိပ် (၁)ဆု တို့ရရှိခဲ့ပြီး ” ဂီတတံခါးလေးဖွင့်ပါဦး ” ဆိုတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ် အပြင် ” ကြယ်ကလေးတွေရဲ့မိုးကောင်းကင် ” ဆိုတဲ့ ကလေးတေးသံရှင် ပြိုင်ပွဲလေးမှာလဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုတစ်ဖက်၊ အနုပညာအလုပ် တစ်ဖက်၊ နဲ့ ပညာရေးတစ်ဖက် အားလုံးမျှတအောင် ကြိုးစားနေရရှာသူ ခင်ပိုးပန်းချီလေးဟာ သူမတို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက လွန်စွာမှ ဆင်းရဲခဲ့သလို သူမရဲ့ အထက်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုခါနီးမှာ အမဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရတာမို့နာရေးတစ်ဖက် နဲ့ စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ခင်ပိုးပန်းချီလေးဟာ ဒီနှစ်(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုနှစ်ရဲ့ စာမေးပွဲကို မအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း နောက်နစ်မျာ ပြန်လည်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်သလို ခင်ပိုးပန်းချီအတွက် နှစ်သိမ့်စကားများ ဆိုခဲ့ကြပါဦးနော်…. ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ…။Celegabar
ခငျပိုးပနျးခြီကတော့ မွနျမာသံနဲ့တရားဓမ်မတေးတှကေိုသာယာနာပြျောကောငျးလောကျအောငျ သီဆိုနိုငျသူ ငယျရှယျတဲ့ ဆယျကြျောသကျ အဆိုတျောမလေးတဈယောကျဖွဈပွီး “လိပျပွာစံအိမျ” ထဲက သားခြော့တေးကို ကကျြသီးထလောကျအောငျ သီဆိုပွခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
သူမ ဟာဆုတံဆိပျပေါငျး (၂၃)ခုရရှိခဲ့ပွီး ရှတေံဆိပျ (၈)ဆု ၊ ငှတေံဆိပျ (၁၄)ဆု နဲ့ ကွေးတံဆိပျ (၁)ဆု တို့ရရှိခဲ့ပွီး ” ဂီတတံခါးလေးဖှငျ့ပါဦး ” ဆိုတဲ့ရုပျသံအစီအစဉျ အပွငျ ” ကွယျကလေးတှရေဲ့မိုးကောငျးကငျ ” ဆိုတဲ့ ကလေးတေးသံရှငျ ပွိုငျပှဲလေးမှာလဲ ယှဉျပွိုငျခဲ့ဖူးသူဖွဈပါတယျ။
မိသားစုတဈဖကျ၊ အနုပညာအလုပျ တဈဖကျ၊ နဲ့ ပညာရေးတဈဖကျ အားလုံးမြှတအောငျ ကွိုးစားနရေရှာသူ ခငျပိုးပနျးခြီလေးဟာ သူမတို့ ငယျစဉျကတညျးက လှနျစှာမှ ဆငျးရဲခဲ့သလို သူမရဲ့ အထကျတနျးစာမေးပှဲဖွဆေိုခါနီးမှာ အမဖွဈသူ ဆုံးပါးသှားခဲ့ရတာမို့နာရေးတဈဖကျ နဲ့ စာမေးပှဲကို ဖွဆေိုခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျ။ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ပဲ ခငျပိုးပနျးခြီလေးဟာ ဒီနှဈ(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုနှဈရဲ့ စာမေးပှဲကို မအောငျမွငျခဲ့သျောလညျး နောကျနဈမြာ ပွနျလညျကွိုးစားသှားမှာဖွဈသလို ခငျပိုးပနျးခြီအတှကျ နှဈသိမျ့စကားမြား ဆိုခဲ့ကွပါဦးနျော…. ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ…။Celegabar
ဖြူစင်​တဲ့ အပြုံး​၊ ချစ်​စရာ​ကောင်း​တဲ့ ဟန်​ပန်​​လေး​တွေနဲ့ ယွန်းယွန်း